Accueil > Gazetin'ny nosy > Ministra Zely sy Rinah : Valo miliara ariary no voahodikodina
Ministra Zely sy Rinah : Valo miliara ariary no voahodikodina
Mipoitra indray ity ny kolikoly avo lenta nataon’ny minisitriy ny fahasalamana ankehitriny Randriamanantany Zely Arivelo. Tamin’ny taona 2020 no nitranga ity raharaha ity nandritry ny covid-19. Mbola tale jeneraly miandraikitra ny fitaovana enti-mitsabo (Directeur général de fourniture de soin) izy tamin’izany fotoana izany. Vola mitentina 2 millions de dôlara na 8 miliara ariary ity raharaha ity izay niarahany tamin’ny Rinah Rakotomanga izay tale ny serasera teny amin’ny fiadidiana ny repoblika araka ny loharanom-baovao azo antoka. Vola nividianana « concentrateur d’oxygène » miisa 1000 ny ampahany amin’ireo vola ireo ary fitaovana hafa ny ambiny hafa. Nilaina tamin’ilay fiadiana tamin’ny valanaretina “coronavirus” ireo vola ireo izay ny banky iraisam-pirenena no nandoa azy. Ny fanjakana Malagasy tamin’ny alalan’ny tahirim-bolam-panjakana no niantoka ny vola ka ny banky iraisam-pirenena tamin’ny tetikasa “Unité de coordination de projet” na UCP no mpandoa ny vola tamin’ilay antsoina hoe “financement rétro actif”.
Tamin’ny orinasa sinoa iray antsoina hoe LONGFIAN: Scitech Co. LTD, izay orinasa sinoa matoatao (société fictive). Sady tsy hita eto Madagasikara no tsy hita tany Chine koa rehefa nanaovana fanadihadiana nanaovana ity kolikoly avolenta ity. Ny vola nefa dia navoakan’ny fanjakana tao amin’ny tahirim-bolam-panjakana.
Ankehitriny rehefa tadiavina ity orinasa ity amin’ny fanamarina ny fampiasana ny volam-panjakana dia fantatra fa tsy misy velively. Tsy misy koa ny porofo nomen’ity minisitra ity amin’izany, izay niarahana tamin’i ramatoa Rinah Rakotomanga tale ny serasera teny amin’ny prezidansa ity.
Iarahana mahalala fa mitaky ny mangaraharaha momba ny fitantanana ny vola azo tamin’iny covid-19 tamin’ny taona 2020-2021 iny ny banky iraisaim-pirenena ankehitriny nefa dia manao bemarenina ny fanjakana. Izany no antony nahitana izao kolikoly avolenta izao indray satria tonga hatrany Chine ny fitadiavana ity orinasa nahazo ny tsenam-panjakana ity nefa tsy hita.
Voalaza koa fa tsy nanaraka ny fenitry ny fanarahan-dalàna amin’ny fahazoana tsenam-barotry ny fanjakana ity raharaha ity fa avy hatrany dia nampiasana fahefana ka noterena fotsiny izao ingahy minisitra tamin’izay Ahmad-Ahmad.
Kolikoly avo lenta indray izany izao no mahazo ny minisitry ny fahasalamana Zely Randriamanantany ary Rinah Rakotomanga izay tale ny serasera teo aloha teny amin’ny fiadidiana ny repoblika. Ho hitan-tsika eto ihany ny tohiny manomboka izao indray. Inona indray no ho fanampahan-kevitry ny fanjakana?